Labo aan cunno karsan karin ayaa calafka isku keenay: warbixin xiiso badan – Filimside.net
Labo aan cunno karsan karin ayaa calafka isku keenay: warbixin xiiso badan
Priyanka Chopra Jonas iyo seygeeda Nick Jonas waa labo maalin walbo ciwaano kala duwan sameeyaan waxaana lagu tilmaamaa labada shaqsi Koonfur Asia iyo Hollywood-ka ugu caansan inay nolosha ku midoobeen sidaa darteed talaabo walbo oo ay qaadaan waa iska ciwaan.
Haddaba Priyanka Chopra ayaa ka qayb gashay barnaamijka dumarka lagu dhiiri galinaayo inay aragtiyadooda qarsoon banaanka kusoo bandhigaay waxayna ka hadashay Youtube-ka bandhigeeda If I Could Tell You Just One Thing.
Waxaana xiiso laheyd halka arinka Priyanka Chopra nolosheeda gaarka u qarsooneed ay la wadaagtay Nick Jonas waxayna tiri “Markii aan Nick is guursan rabnay waxaan u sheegay inaan cunto karis aqoonin sidoo kalena uusan iga sugin raashiin aan kariyay inuu cunno!”
Priyanka oo hadalka sii wadato waxay tiri “Nasiib wanaag Nick markii uu ogaaday sirteyda ah inaan raashiin karis aqoonin isagana wuxuu iigu jawaabay ‘Haye anigana ma karin aqaano!”
Waxay sheegtay in Priyanka jawaabta uu siiyay seygeeda Nick Jonas ay ku faraxday madaama labo aan cunno karis aqoonin calafka isku keenay waxayna ogaatay in seygeeda raashiin karis ka rabin iyadana seygeeda ka sugeyn cunno uu soo diyaariyo inay heli doonto.
Priyanka Chopra sidoo kale waxaa lagu casuumay shirka dhawaan la qaban doono shirweynaha dumarka u gaarka ah (Women of the World Summit) waana midkii 10-aad ee la qaban doono waxayna ka mid tahay hablaha dunida ugu saameynta baddan dhanka filim jilista, hawlaha samafalka, ganacsiga iyo dhanka Fashion-ka.
Waxaa Aqrisay 854